कोरोना महामारी घटेपनि किन बढेन पर्यटक ? - नेपाल कुरा
कोरोना महामारी घटेपनि किन बढेन पर्यटक ?
प्रकाशित मिति: २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार March 5, 2021 , संवाददाता: नेपाल कुरा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै पुरानै अवस्थामा फर्कदैछ । हाल कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै जानु र खोप वितरण कार्य पनि सुरु भइसकेकाले पहिले जस्तो कोरोना आतंक छैन । कोरोना र रुघाखोकीलाई मानिसहरुले एउटै रुपमा मान्न थालेका छन् । अर्थात कोरोनालाई सामान्य रुपमा लिन थालेका छन् । यद्यपी सावधानी अपनाउन भने भुल्न हुँदैन । कोरोना संक्रमण घटेसँगै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लगाएको प्रतिबन्धहरुलाई फुकुवा गरेको छ । पहिले विदेशबाट आएका नागरिकलाई होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यकारी नियम थियो । हाल उक्त नियमलाई परिमार्जित गरी कुनै पनि देशका नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) लगाएको प्रमाणपत्र देखाए क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना खोप लगाएका व्यक्तिले कुनै पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा सहजै घुमफिर गर्न सकिन्छ ।
जसका कारण नेपाल आएर सात दिनसम्म अनावश्यक खर्च गरी बन्दी जसरी एउटै कोठामा कोचिनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । विशेष गरी नेपालमा निम्न र मध्यम वर्गका पर्यटकहरु आउने गर्दछ । क्वारेनटाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता हटेसँगै त्यस्ता पर्यटकहरुलाई थोरै पैसामा पनि घुमफिर गर्न सहज भएको छ ।
पर्यटकलाई लगाएको विभिन्न प्रतिबन्ध हटाइए पनि नेपाल आउने पर्यटकको संख्या भने उत्साहजनक देखिदैन । अग्ला÷अग्ला हिमचूली, प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरु, विभिन्न कला, सस्कृति र परम्परा लगायत प्राकृतिक स्रोत र साधानले भरिपूर्ण भूमि नेपाल पर्यटनका लागि आकर्षक ठाउँ हो । उक्त सुन्दरताको अवलोकन गर्न पर्यटक जुन रुपमा आउनु पर्ने हो, त्यो रुपमा नआएको सरकारी तथ्यांकहरुले देखाएको छ ।
अझै पनि विगतका वर्षहरुको तुलनामा नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रुहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा न्यून देखिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै हवाइमार्ग मार्फत सन् २०१९ मा ४१ लाख ३८ हजार हवाइ यात्रुहरु भित्रिएका थिए । तर सन् २०२० मा १० लाख ३९ हजार मात्र हवाइ यात्रुहरु भित्रिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । उक्त संख्या सन् २०२० नोभेम्बर महिनासम्ममा लगभग ६५ प्रतिशतले कमी हो । यसैगरी डिसेम्बरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय एवं आन्तरिक हवाइ यात्रुहरु खासै बढेनन् । कोरोना महामारीमा हवाइमार्ग र पर्यटन क्षेत्रमा लागेको प्रतिबन्धका कारण पर्यटकको संख्या कमी भएपनि पछिल्लो समय पनि अपेक्षित रुपमा पर्यटकको संख्या बढ्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।
पर्यटकको संख्या घट्दा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आम्दानीमा आर्थिक वर्ष २०७५ र २०७६ को तुलनामा आ.व. २०७६ र ०७७ मा करिब ६३ प्रतिशतले राजश्व कमी आएको बताइएको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न देशका हवाइ सेवा कम्पनी र नेपालकै हवाइ तथा हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई उडान अनुमति, रुट परमिट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, पार्किङ, जरिवाना लगायत अन्य सेवा सुविधा दिएबापत गर्ने आम्दानी बापतको कमी हो । हाल समग्र पर्यटन व्यवसायीहरुको हालत पनि उस्तै छ ।
नेपालले हवाइ सेवा क्षेत्रमा गरेको सुरक्षात्मक प्रबन्ध र हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने सुधार प्रकृयामा अझै पनि सुधार नगरेको भन्दै युरोपियन युनियनले नेपाली जहाजलाई ८ वर्षदेखि कालो सूची (बलाक लिस्ट) मा राखेको छ ।
सरकारी पक्षबाट नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउन प्रयास भइरहेको बताइएपनि त्यसको परिणाममा देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल नेपाल ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
जसको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा बढी पर्ने देखिन्छ । सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उदेश्यले सन् २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ भनेर घोषणा गरिएतापनि कोरोनाका कारण स्थगित हुन पुग्यो । फेरी पनि पर्यटकको चहलपहल बढाउन र पर्यटकका लागि आउने सहज वातावरण बनाउन नेपाललाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित निकायले विशेष पहल गर्न जरुरी छ ।
सन्दर्भ : विश्व सिमसार दिवस, पर्यटनका लागि सिमसार
बौद्ध स्तुपा विवाद : विकास समिति र गुठीबीच जुङगाको लडँई, कहिल्य खुल्ला ताला ?